Dalalka G7 oo fariin goodis ah u diray Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Dalalka G7 oo fariin goodis ah u diray Soomaaliya
Waddamada loo yaqaan G7, oo soo saaray war-mrtiyeed ee kaga hadlayaan xaaladda Soomaaliya, ayaa ku goodiyay in haddi lagu laaban waayo miiska wadahadallada ay wax ka badali doonaan habka ay hadda u wajahaan Soomaaliya.
LONDON, UK - War ka soo baxay, Wasiirrada Horumarinta iyo Arrimaha Dibadda ee dalalka ku bahoobay G7 ayaa lagu muujiyay walaac xooggan oo ku saabsan jahaweeerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, kaas oo ka dhashay dib u dhaca ku yimid doorashooyinka dalka.
“Waxaan si aad ah uga walaacsannahay is mariwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, isku dhacyadii dhawaa ee rabshadaha watay ee u dhexeeyay Dowladda iyo xoogagga taabacsan mucaaradka, iyo cawaaqib-xumada bani'aadamnimo ee ka dhalatay”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay G7.
Wax ay sheegeen in ay ka xun yihiin go’aankii lagu kordhiyay mudada Farmaajo iyo Baarlamaanka Soomaaliya, ee labada sano ahayd, waxayna xuseen in taasi aysan xal u hayn culeysyada socda ee geeddi socodka doorashooyinka, taa badelkeedana ay wiiqeysay kalsoonida lagu qabo hoggaanka, horumarka Hay'adaha, nabadgelyada iyo mustaqbalka dadka Soomaaliyeed.
Waxa ay so dhaweeyeen ansixintii Golaha Shacabka ee May 1 2021, taas oo ahayd dib u bilaabidda wadahadallada u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo hoggaamiyeyaasha Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Federaalka, si loo dhameystiro, qaabka doorashadka ku saleysan heshiiskii 17-kii September 2020 lagu gaaray Caasimadda.
“Waxaan hoosta ka xarriiqeynaa in aynaan taageeri doonin geeddi-socod is barbar socda, mid aan loo dhamayn, ama dadaallo cusub oo horseedaya kordhinta muddo xileedkii hore. Waxaan ku boorinaynaa dhamaan madaxda Soomaaliyeed inay aad isu xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah, kaas oo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay kasii daraan, waana muhiim in dhammaan dhinacyadu ay ilaaliyaan amniga iyo xasilloonida Soomaaliya.” Ayaa lagu yiri war murtiyeedka.
Waxa ay soo dhaweeyeen go’aanka Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika ay ku magacaabayaan Ergey gaar ah. Madaxda Soomaaliya ayay ugu baaqeen in ay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran dadka Soomaaliyeed, waxayna ku booriyeen in ay si deg deg ah ugu laabtaan miiska wadahadalada.
Gabagabada War-saxaafadeedka Wasiirrada Horumarinta iyo Arrimaha Dibadda ee G7, oo u muuqday mid hanjabaad ah, ayaa lagu yiri, “Haddii ayna taasi dhicin, waxay horseedi doontaa in bulshada caalamku wax ka bedesho qaabka ay u wajaheyso Soomaaliya".
The Group of Seven (G7), waa Urur Dawladeed ay ku bahoobeen dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka.